Inona no atao hoe ny tombony azo amin'ny soisa CNC milina raha oharina amin'ny isa lathe fanaraha-maso? - China Shandong New Ankai-Kitco
Soisa cnc milina an'ny fitaovana fikarakarana ny fametrahana mazava tsara, ary afaka hamita ny sarotra machining ny fiara, mihaohao, ary atsofony, mahasorena, sokitra ary nanimba tamin'izany andro izany. Izany no tena ampiasaina amin'ny fanodinana ny fametrahana mazava tsara batch fitaovana sy ny zana-tsipìka voalambolambo manokana miendrika faritra tsy fenitra.
Noho ny firafitry ny milina mandeha dia hafa noho ny nentim-paharazana lathe isa fanaraha-maso, ny fahombiazana sy ny machining machining fametrahana mazava tsara ny milina mandeha dia ambony kokoa noho ny an'ny NC lathe. Ento fanaintainana amin'ny biaxial fandaharana ity famolavolana fitaovana, indrindra mamonjy ny fikarakarana tsingerin'ny fotoana, fifanakalozana ny fomba sy ny fitaovana ho an'ny milina fitaovana amin'ny alalan'ny shortening ny antsy, maro fitaovana toerana hifanindry sy ny kofehy Chip mahomby axial mihetsika nifandimby asa, mivantana ampela nirakitra anarana asa indroa nandritra ny fikarakarana, ny banga hanafohezany ilay fotoana. Chip fitaovana fanapahana Mitana andraikitra tena manan-danja eo amin'ny dingan'ny ny ampela machining sy ny workpiece clamping faritra. Manome antoka mafy ho an'ny tsy tapaka machining marina tsara. Ao amin'ny fomba fijery ao am-po milina tsena, 38mm ny savaivony fikarakarana ny lehibe indrindra, izay mahatonga ny milina mandeha mitana tombontsoa lehibe teo amin'ny fametrahana mazava tsara fanodinana mpiray tsena. Andian-dahatsoratra ity ny fitaovana milina Azo fitaovana amin'ny fitaovana mandeha ho azy sakafo, izay mahatsapa tanteraka ny tokan-tena mandeha ho azy milina famokarana fitaovana, mampihena ny vola lany ny asa sy ny vokatra ratsy eo amin'ny dingana famokarana, ka azo ampiasaina mba hamokatra be dia be ny fametrahana mazava tsara ny faritra lavaka.
Ny machining fahombiazana sy ny machining araka ny marina kokoa noho NC lathe efa nisy hatsaran'ny dingana, noho ny roa fandaharana fitaovana, indrindra mampihena ny fikarakarana tsingerin'ny ny fotoana, sy ny fotoana mba hanakalo fitaovana eo amin'ny milina fitaovana amin'ny alalan'ny shortening ny antsy, maro fitaovana toerana hifanindry ny asa, ny tari-dresaka nanapaka mahomby axial mihetsika nifandimby asa, ampela mivantana nirakitra anarana miasa ny roa fotoana fanodinana, mahatsapa ny fotoana fohy. Ny taom-piotazam machined fitaovana foana ao amin'ny clamping ampahany ny ampela sy ny workpiece, izay miantoka tsy tapaka ny fametrahana mazava tsara ny machining marina. Amin'izao fotoana izao, ny ambony indrindra machining savaivony ao am-po milina ao an-tsena dia 38mm, ary manana tombontsoa lehibe teo amin'ny fametrahana mazava tsara fanodinana mpiray tsena. Andian-dahatsoratra ity ny fitaovana milina azo fitaovana amin'ny fitaovana mandeha ho azy sakafo mba hahatakatra ny mandeha ho azy famokarana fitaovana milina iray, ka mampihena ny vola lany sy ny asa ratsy tahan'ny vokatra. Tena mety ho an'ny famokarana ny fametrahana mazava tsara faobe lavaka faritra.
Post fotoana: May-02-2018